Noho ny fisian’ny fifandonana Nagorno-Karabakh, tapatapahan’ny manampahefana ao Azerbaijàna ny aterineto manerana ny firenena · Global Voices teny Malagasy
Tapatapaka ny fidirana aterineto nanomboka tamin'ny 27 Septambra
Voadika ny 30 Septambra 2020 7:39 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, عربي, Ελληνικά, polski, русский, 日本語, English
Saripika an'i Jordan Harrisson tao amin'ny Unsplash. Nampiasàna ny lisansa Unsplash .
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Azerbaijan Internet Watch ary naverina navoaka etoana noho ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Satria mitohy ny fifandonana henjana eo amin'i Armenia sy Azerbaijàna, nambaran'ireo manampahefana Azerbaijani tamin'ny 27 Septambra fa mety hiditra amin'ny fameperana ny fidirana aterineto manerana ny firenena izy. Tato anatin'ny andro vitsivitsy lasa, nitatitra fahasahiranana amin'ny fahazoana miditra amina sehatra media sôsialy sy ireo fampiasa ifandraisana ireo mpampiasa aterineto.
Ny 27 Septambra no nipoaka ny fifandonana teo amin'ny firenena roa tonta momba ny fitakiana ireo faritra an-tendrombohitra ifanolanany ao Nagorno-Karabakh sy ireo faritany fito mifanila aminy. Ny andaniny sy n y ankilany dia samy namoaka tatitra fahafatesana avy. Azerbaijan, izay tany am-boalohany nilaza fa namaly ireo daroka baomba nanerana ny tsipika fifandraisana, nilaza ny ampitson'izay hoe azon'ny miaramilany ny fifehezana ireo vohitra fito.
Raha niantso ny hampiatoana avy hatrany ny herisetra sy hiverenana an-databatry ny fifampiresahana ireo mpitan-tsoroka iraisampirenena, ny ankolafy roa kosa tsy taitra amin'izany hatreto.
Tokony ho tamin'ny 10 ora maraina, ora any an-toerana, ny 27 Septambra, namoaka fanambaràna ny miisitry ny fitaterana, fifandraisandavitra arny ny teknolojia avo lenta nilaza fa nasiana fameperana ny fahafahana miditra aterineto “mba hisakanana ireo fihantsiana miparika be ataon'ny Armeniàna”
Fanambaràna avy amin'ireo manmpahefana Azerbaijani tamin'ny 27 Septambra: “Hametraka fameperana amin'ny fahafahana miditra aterineto manerana ny firenena ny ministeran'n fitaterana, fifanddraisandavitra, ary ny teknolojia avo lenta. Antenainay fa ho tsapan'ny olompirenena Azerbaijani ny olana mety ho aterak'izany fameperana izany mandritra ny fotoana isian'ny fifandonana.” Pikantsary avy ao amin'ny tranonkalan'ny governemanta.
Eny tokoa, nilaza ny sasany tamn'ireo mpampiasa aterineto fa nanana olana tsy afaka niditra tamin'ny tambajotra sôsialy:
Toa sahala amin'ny hoe ny fahafahana miditra amin'ny sehatry ny media sôsialy ihany no nasian-dry zareo teritery. Tsy misy olana mihitsy rehefa hiditra aterineto [amin'ny tranonkala hafa]. Azo atao tsara ny miditra amin'ireo tranonkala hafa.
Toa efa andro iray talohan'io no nanomboka ny fahasahiranana miditra amin'ny aterineto. Tamin'ny 26 Septambra, Hebib Müntezir, Azerbaijani mpanao gazety ao amin'ny Meydan TV manana ny foibeny ao Berlin, nandefa tao amin'ny Facebook hoe :
Ao Azerbaijan, mitaraina amin'ny fikorianan'ny aterineto ireo mpampiasa. MArobe no nilaza fa lasa nihisatra be ary misedra olana amin'ny fampakàrana lahatsary sy sary. Ary mba manao akory ny toedraharaha any aminareo any?
Tamina fotoana iray voafaritra, ireo tranonkala rehetra mampiasa ny gov.az dia nikatona avokoa tamin'ny 27 Septambra.
Nikatona daholo koa ireo tranonkala mampiasa ny .gov.az isan'izany ny https://t.co/DbfCTYL84y sy https://t.co/WJUKYKdrQR https://t.co/N20cYTu7c4
— Cavid ⛧ (@cavidaga) 27 Septambra 2020
Araka ny ambaran'ny Access Now, fikambanana iray tsy mitady tombony ara-bola miaro ny zo nomerika ary mandrindra ny “Keep It On,” fanentanana iray manohitra ny fanapahana aterineto erantany, “ny fiarovana ny daholobe, ny filaminampirenena na ny fanakanana ny vaovao diso dia fomba iraisana ampiasaina hanamarinana ireo fanakatonana.”
Asehon'ireo angondrakitra azon'ilay fanentanana y fitomboana mibaribarin'ny isan'ireo fanapahana tato anatin'ny taona vitsy lasa. Ny 2019 monja, Access Now nahita hoe nisy 213 ireo fanapahana aterineto tany amina firenena 33, izay manome andro 1.706 ny fitambarany.
Tsy vaovao ao Azerbaijan ny fanapahana tahaka izany. Tamin'ny Aprily, nisy mpitarika avy amin'ny antoko pôlitika mpanohitra notapahana ny antso finday sy ny tolotra aterineto tany an-tokantranony nialohan'ny antsafa iray tao amin'ny fahitalavitra. Raha amin'ny ankapobeny, aorian'ny olana teknika no misy fampilazàna fahatapatapahana, misy tranga hafa izay iniana atao ny fampihisarana ny fikorinan'ny aterineto, indrindra fa mandritra ireo tranga pôlitika.
Raha mihevitra ny sasany amin'ireo Azerbaijani mpampiasa aterineto fa ilaina ny fanapahana ny aterineto mba hisorohana ny fiparitahan'ireo vaovao tsy voamarina, ny hafa indray milaza hoe tsy tokony hitsabahan'ny fanjakana velively ny fahafahana miditra aminy.
Tamin'ny fotoana namoahana ity tantara ity, mbola tsy araka ny tokony ho izy ny fahafahana miditra amin'ireo tranonkalan'ny governemanta, ary mbola manohy mitatitra fisiana fameperana ny fikorianan'ny aterineto ihany sy ny fidirana amin'ireo sehatra media sôsiale ireo mpampiasa izany.